AR2: urongwa uye kudzorerwa muArles - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »AR2: urongwa uye kudzorerwa muArles
le 17 May 2019 - Caroline DUPUY - Economy
DR - Antoine Rolland anoshanda pamatanda akawanda, kubva kuEurope.
Antoine Rolland anoshanda nemapuranga uye anoedza kuderedza carbon carpint. Chinangwa chinotarisirwa nevatengi vevanhu uye vadzidzisi munzvimbo yeArles.
Mushure mekunge vashanda semuvezi pasi pehurumende yehurumende, Antoine Rolland, nyanzvi mukati mekugadzirwa kwemukati (kupfeka jira, cupboard, kicheni, nezvimwewo), akasarudza, makore maviri akapfuura, kuti asarudze kambani, AR2 (Antoine Rolland Agencement Restoration). Chisarudzo ichi chakanga chichidikanwa nokuti ndakaisa mari mumichina, ndinodhara musangano uye ini ndinoshanda nezvinhu zvakawanda zvekushandisa. Zvaikosha kuti ndiwane VAT pane idzi yekupedzisira , inopfupisa mhizha.
Chisarudzo chakanga chisina kujeka, zvakadaro, chakapiwa kuoma kwemutemo weFrance munharaunda iyi. Ini chete ndine CAP. Uye, kunyange zvazvo ndine ruzivo rwakawanda mumunda wangu, inofanirwa kubvumirwa kuti nyaya yezvemari inenge iri zvishoma kubva kune whack. Icho chiri munguva yehurukuro yakarongedzwa neChambamende yezvokutengeserana nekugadzirwa kweprovence-Alpes-Cte d'Azur nzvimbo (CMAR Paca) kuti nyaya yacho inosvika uye mhinduro yakagamuchirwa. Yakanga yakajeka uye yakakwana. Munhu ari pamberi pangu aive akachenjera kwazvo, akachenjera. Iniwo ndakashanda naye pandiri bhizimisi urongwa.
Antoine Rolland's clientele yakagadzirwa nevanhu asiwo yevashandi, vatengesi kunyanya. Anoshanda pamatanda akawanda akaoma, kubva kuEurope. Masangano ake ari muArles apo anobatsirwa kubva kune guru rese rese unyanzvi uye wega. Saka haana kuwana nguva yekuumba webhusaiti kana kuti kuzarura nhoroondo ye Facebook! Ndiri kuisa mifananidzo pa Instagram. Asi ini nguva dzose handina nguva , anobvuma.
Kufanana nemhizha dzakawanda dzinotanga, Antoine Rolland anoshanda oga. Mazororo haasi ezvino nokuti mazuva angu haasi kwenguva refu. Pakati pefoni, zvinyorwa, kutungamira, ndisina nguva yekugadzira, basa rangu. Asi ini ndinodada nebasa iri.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.nouvellespublications.com/ar2-agencement-et-restauration-a-arles-2063.html